Slackware 14.1: KDE လုံးဝဖယ်ရှားပါ Linux မှ
Slackware 14.1: လုံးဝ KDE ဖယ်ရှားပါ
DMoZ | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
SlackTip # 2: KDE လုံးဝဖယ်ရှားပါ
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုသင်ပိုမိုလိုချင်သည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည် KDE သင့်ရဲ့စနစ်အတွက် Slackware ကိုတီထွင် ဒါကြောင့်သင်က၎င်း၏အထုပ်အပါအဝင်လုံးဝကဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှေးခယျြခဲ့ကြပြီ။
အတွင်းအထုပ်များကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းများတစ်ခု Slackware ကိုတီထွင် ဒီကိရိယာကတဆင့် pkgtool (အဖြစ် အမြစ်).
အဘို့အများစွာသောရွေးချယ်စရာတွေထဲမှာ pkgtool ငါတို့တွေ့ခဲ့တယ် Remove.
ဒီကနေကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ထုတ်ပစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအထုပ်တစ်ခုနဲ့ package တစ်ခုရွေးရမယ်။
ဒါပေမယ့်သင်ဟာအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မှားယွင်းတဲ့ package ကိုမှားယွင်းဖျက်မိတာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူး။
ကံကောင်းထောက်မစွာဤကိစ္စရပ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဖယ်ရှားပေးမည့်ရိုးရှင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည် KDE လုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကနေ Slackware ကိုတီထွင်၎င်းကိုခေါ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် slackpkg အရာနှင့်အတူပေါင်းစည်းလာပါတယ် Slackware ကိုတီထွင်အကယ်၍ အကြောင်းပြချက်အချို့သည်သင်၏ system ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါကသင် download လုပ်နိုင်သည် နေပြည်တော် သုံးပြီးထည့်သွင်းပါ installpkg.
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည် အမြစ် ငါတို့ရိုက်တယ်
အဘယ်အရာကိုငါတို့ရှိသမျှသည် packages များနှင့်အတူမျက်နှာပြင်နှင့်အတူတင်ပြပါလိမ့်မယ် KDE ပယ်ဖျက်ရန် (ကျွန်တော်ပြီးနောက်) မည်သည့်အရာကိုမဆိုထားလိုသည်။
တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ ။ ဤသည်ရွေးချယ်ထားသော packages များဖယ်ရှားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပြီးဆုံးသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်ထပ်မရှိကြောင်းဖော်ပြလိမ့်မည် KDE ငါတို့အတွက် Slackware ကိုတီထွင်.
ကလစ် ဒီမှာ ပိုမိုသိရှိရန် SlackTips.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Slackware 14.1: လုံးဝ KDE ဖယ်ရှားပါ
သင်နောင်တမရပါ၊ သင်ဒီမှာလမ်းလျှောက်နိုင်သည် https://blog.desdelinux.net/author/dmoz/
Slackware တွင် installation DVD ၌ဤကိရိယာရှိကြောင်းမည်သူမျှမသိသော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ရပြီး၎င်းတို့ကိုပိတ်ထားသည်ကိုသူတို့မသိကြပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Slackpkg နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်သောအရာမှာပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည် slapt-get ထက်မှီခိုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည် (သူတို့ကပြောခဲ့သည်။ slack-haters?) နှင့် package များကို meta-packages များအဖြစ်အမြဲဆက်ဆံသည်။
တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင် Pkgtool နှင့်အတူ Slackpkg ၏ဂုဏ်အသရေရှိသည် (ကောင်းစွာ Debian သည်အနည်းငယ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ကြော့ရှင်းမှုအားမအောင်မြင်ပါ) ။
ဤအရေးအသား၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ = D ကိုအကြောင်းကြားရန် ...
Slackware တွင် package များကိုကိုင်တွယ်ရန်အတွက်ကိရိယာများစွာရှိသည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်သည်၎င်းအကြောင်းကိုတစ်ဝက်ရေးသားထားပြီးဖြစ်သည်။ မကြာမီ၎င်းတို့ကိုပြီးအောင်ပြီး Desdelinux တွင်ထားလိုက်ပါ။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုသင်၏ယခင် post ကိုအတူပြန်လာစေပြီ .. ဒါဟာ Slackware ကိုအခြား linux ကို distros ရှိသည်မဟုတ်တစ်ခုခုရှိသည်မှန်သည် ..
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါ Gnome ကို version 14.1 ကနေချစ်ကတည်းကငါ့ကိုယ်ပိုင် Slackware3ကို Gnome 3.8.4 နဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။
စိတ် ၀ င်စားသူတိုင်းအတွက် A, AP, D, F, K, L နှင့် N အုပ်စုများကိုတပ်ဆင်ပြီး JHBuild နှင့် Gnome ထည့်သွင်းမှုကိုကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ 😀
နှင့် Dropline GNOME? Dropline GNOME ကော။
ငါ GNOME ကို Dropline GNONE မှတဆင့် install လုပ်ပြီးပြီဆိုတာပြောလိုက်တယ်။ ဒါက xD ကမရှင်းနိုင်ဘူး။
ငါတစ်ယောက်ယောက်ကို Slack = D ကိုသုံးဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်ဆိုတာသိရတာဝမ်းသာပါတယ်။
Slackware သည်ထူးခြားသည်။ သင်၎င်းကိုအသုံးမပြုမှီသင်နားမလည်နိုင်ပါ။ I …ငါပြောခဲ့သလိုငါကဲ့သို့သောပါးစပ်ထဲတွင်အရသာကောင်းသောအရသာကိုကျန်ရှိစေခဲ့သည့်ဖြန့်ဝေမှုများအပါအဝင်ဥပမာ - = ဥပမာ…)
ငါ Gnome ပရိတ်သတ်မဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်ငါကငါ့ Slack ထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့မဟုတ်ခဲ့ကြပေမယ့်ငါသူတို့ JHBuild နှင့်အထူးသဖြင့် Dropline GNOME အတွက်ငါ့သိချင်စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးသည်ဟုပြောရမည်ဆိုလျှင်သင်ခန်းစာယူရန်ကောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်လော။ 😉…
OK: D ။ Droppline Gnome အကြောင်းသင်၏ post ကိုဒီ repo မှ install လုပ်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိ၊ မရှိသို့မဟုတ် JHBuild ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသော compilation time ခံစားနေရလျှင်ကြည့်ရှုခြင်းကိုငါအာရုံစိုက်လိမ့်မည်😀😀
ကျေးဇူးပြုပြီး console ရဲ့နောက်ခံမော်နီတာကိုလိုချင်ပါတယ်
ပြီးတော့သူတို့က Slackware ကိုကိုင်တွယ်ရတာခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာလား။ တစ်ခုတည်း command နှင့်အဆင်သင့်အရာအားလုံး, ကောင်းတစ်ပို့စ်။
Slackware မှာကျွန်တော်က KDE ကိုကြိုက်ပေမယ့်တကယ်တော့အဲဒါဟာကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ KDE ရဲ့အကောင်းဆုံး "အကောင်အထည်ဖော်မှု" တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်သူက KDE ကိုအထူးပြုထားတဲ့အခြားအရာတွေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။
Slackware အသုံးပြုသူများသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သင့်ပြီးပိုမိုပေါ့ပါးသော DE သို့မဟုတ် WM ကိုသုံးသင့်သည်ဟုclichéတစ်ခုရှိသော်လည်းသို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ရိုးရှင်းသောဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မဆိုးပါ။ Slackware ကိုငါကြိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာအားလုံးကလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာပဲ။ ကာလ။ ငါသည်အခြား distro နှင့်အတူရှိလိမ့်မည်ဟုပြproblemsနာများစွာရှောင်ရှား။ အထူးသဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်လှိမ့်ထုတ်လွှတ်မှုဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်အလွန်မကောင်းပါ။ ၎င်းတို့အားမည်သို့ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုမသိပါ။ စနစ်တစ်ခုလုံးသည်တစ်ပတ်မှတစ်ပတ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတစ်လမှတစ်လမဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။
ငါသည်လည်း C ++ နှင့် Qt ကိုမကြာသေးမီကအသုံးပြုနေပြီး KDE ကို Slackware တွင်သိမ်းထားရန်အကြောင်းပြချက်နောက်တစ်ခုရှိသည်။
ပျင်းရိပျော်မွေ့ခြင်း = D ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😉…
ငါ Slackware များအတွက် KDE အတော်လေးကောင်းသောခံစားရကြောင်းသဘောတူသည်, ငါ DE နှင့်အတူကိုင်တွယ်သော distros အများအပြားအတွက်ထက်သာ။ ကောင်း၏, သို့သော်, ငါငါ့ကိုအခြေစိုက်စခန်း DE အဖြစ်ကရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးသောအရာကိုမသိရပါဘူး, ဒါကြောင့်နေဆဲငါ့ကိုဖမ်းနိုင်, ငါပိုဖြစ်၏ အကောင်းဆုံးမှာ XFCE စတိုင်လ်။
ငါကနင့်ကိုချစ်ဖို့ငါမချစ်ပေမယ့်ငါနင့်အတွက်နင်ကိုမရွေးခဲ့ဘူး၊ ငါ့ဘ ၀ ပဲ၊ ငါအမြဲပြောခဲ့သလိုအရသာအရသာအတွက် ...
C ++ နှင့် Qt အကြောင်းအကြံဥာဏ်တောင်းပါလိမ့်မည် for ...
tojoska ၈ ဟုသူကပြောသည်
slackware 14.2 86_64 မှ qt နှင့် postgresql နှင့်အတူ ccs compiler နှင့်အခြားသူများပါ ၀ င်သောဝိုင် piklab ဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာများစွာကိုဆက်လက်လုပ်နေသည် ... slackware
local Ubuntu repository ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ